Aqoonyahaynka Barriga iyo Koonfurta London oo casho sagootin ah ku maamuusay Agaasimaha Waxbarashada iyo tacliinta sare Mud: Khadar Axmed Diiriye | Salaan Media
Aqoonyahaynka Barriga iyo Koonfurta London oo casho sagootin ah ku maamuusay Agaasimaha Waxbarashada iyo tacliinta sare Mud: Khadar Axmed Diiriye
Aqoonyahaynka Barriga iyo Konnfurta London oo casho sagootin ah ku maamuusay Agaasimaha Waxbarashada iyo tacliinta sare Mud: Khadar Axmed Diiriye
Casho-sharaftan oo ka dhacday Barriga London ayaaa waxa kazoo qayb galay shakhsiyaad aqoon leh oo ka mid aha Jaliyadda Somaliland ee Barriga iyo Koonfurta London. Kulankan ayaa lagu maamusay Agaasimaha Wasaaradda Wax-barashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Mudane: Khadar Axmed Diiriye oo mudooyinkii dambe ku sugnaa carriga UK hadase kusii jeeda dalkii hooyo. Agaasimaha ayaa aad uga mahadnaqay casho sharafeedkan iyo maamuuska loo sameeyey isagoo ku tilmaamay “rag ay asxaab iyo macrifo fog isu leeyihiin oo goobta ka muuqda inay farxad gaar ah ii tahay” Qaar ka mid ah aqoon yahaynka madasha ku sugnaa ayaa dhinacooda farta ku fiiqay inuu agaasimuhu magic iyo maamuusba metelo raggan fadhiya oo ay ku dhaataan,
Waxa kaloo ay agaasimaha ku ammaaneen kartidiisa iyo wax qabadka uu muujiyey muddo xileedkii uu joogay wasaaradda. Qaar ka mid ah kazoo qayb galayaasha oo agaasimaha ku booqday dhawaan xafiiskiisa shaqo ee caasimadda Hargeysa ayaa ka marag furay wax qabad hagar la’aan ah iyo caddaalad uu ku wado shaqada wasaaradiisa. Dhinaca aklena, agaasime Khadar ayaa si faahfaahsan uga war bixiyey xaalada iyo heerka ay haatan ku sugantay wax barashada dalku.
Isagoo si qota dheer uga xog waramay koboca waxbarasho ee muuqda intii uu shaqada ku jiray islamarkaana tilmaamay meelaha hoosu dhacu ka jiro, kala fogaanashaha waxbarasho ee gobolada iyo degmooyinka dalka iyo qorshayaasha wasaarad ahaan uga yaala faraqa wax barasheed ee gobolada bariga iyo galbeedka Somaliland. Ugu dambayn wuxu agaasime Khadar ku booriyey aqoon yahankii goobta joogay iyo kuwa kaleba inay isu taagaan taageeridaiyo kobcinta waxbarashada heerkasta oo ay nootaba. Waxana halkaas duco iyo sagootin lagu faray agaasime Khadar oo dhawaan u ambabixi doona dalkii hooyo.